Inkxaso - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
Indlela yokwenza uvavanyo Clean:
uphume -Here sijonga indlela ekulula ngayo yitshintshe, ukutsala ze aphakamise umatshini. Thina test iikhaphethi kunye nemigangatho nzima kwaye ukhangele iingxaki ezifana overbalancing koomatshini tye, ukuthamba kunye nemiba eziqhelekileyo ezifana "nangokunamathela" iintloko phezu imigangatho nzima ngenxa iintloko cleaner yenzelwe kakubi.
Ukucocwa Carpet - We uvavanyo usebenzisa powder emhlophe phezu iikhaphethi ezimnyama kunye novavanyo emva lima emithathu, apho omnye engacimekiyo sizinzile kwaye wehla kulo mmandla.
Ukucocwa Edge - Olu vavanyo ujonga indlela kakuhle umatshini ococa ukuya elunxwemeni ezigudle iibhodi phambi kokuba kufuneka babhenele izixhobo specialist mqolomba.
Ukucocwa floor nzima - Siya kuqhuba iimvavanyo efanayo imigangatho nzima kwaye sijonge indlela kakuhle le vacuum cleaner yadika uthuli phezulu evela nasezimfanteni nemisantsa ukutyibilika.
Ukucocwa iinwele Pet - Koda kube nini nokuba zingaphi lima kuthatha ukucoca isangqa 40 cm-sangqa echazwayo-kwiinwele Pet.
Okucoca izinyuko - Sibona indlela ekulula ngayo ukucoca kwi izinyuko usebenzisa izixhobo enikiweyo. Sinikela ingqalelo kakhulu kulula kangakanani na ithumbu detachable nendlela athwale wokutshayela ukuba ufuna ukwenza.
Ingxolo - We ukulinganisa indlela ingxolo umatshini na decibels abhalwe kwinqanaba entloko.
Kwakhona ukhangele ukuze ubone ukuba yintoni zifakiwe izincedisi, ukuba zisebenza njani ubhetyebhetye kangakanani kakuhle kwaye mshini. Ngokomzekelo, amanye wakususa abaziintshatsheli imisebenzi ethile, ngoxa abanye anenqwaba izixhobo kubenza vula ezininzi ngakumbi.
Ezinye iinkcukacha sihlole ziquka ubude intambo kwi wakususa Ekso-, ubomi bebhetri kwimodels cordless nendlela ekulula ngayo ukwenza zingabinanto imifuziselo bagless.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane: 86 574 63932251